शुक्रबार, १८ असार, २०७८, राष्ट्रिय डेली
काठमाडौं, असार १८ गते । कोभिड संक्रमण पुष्टि भएका बिरामीमा देखिएको म्यूकर माईकोसिस (कालो ढुसी) का संक्रमितहरु नेपालमा अहिलेसम्म २२ जना देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा.समिर अधिकारीका अनुसार अहिले नेपालका विभिन्न जिल्लामा गरी २२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । अहिले कुन अस्पतालमा कति छन् भन्ने यकिन भने भइनसकेको उनले बताए ।
यता त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा अहिलेसम्म म्युकरमाईकोसिसका १५ जना बिरामी भर्ना भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । जसमध्ये अहिले आठ जना उपचाररत छन् भने एक जनाको मृत्यु भएको र बाँकी डिस्चार्ज भएको अस्पतालका डा. राजेन्द्र प्रधानाङ्गले बताए ।
डिस्चार्ज भएकामध्ये केहिको आँखाको शल्यक्रिया गरेर घर पठाईएको छ भने केहिको शल्यक्रिया गर्न नै नमिलेका कारण घर पठाउनु परेको उनले बताए ।
शल्यक्रिया गरेर घर फिर्ता भएकाहरुमा पूर्णतया निको हुने सम्भावना कम नै रहेको बताउँदै उनले भने, “यो शल्यक्रिया गरेपछि निको हुन्छ नै भन्ने हुँदैन, हामीले आँखा वरीपरी जमेको रगत सफा गरेर हेर्छौ त्यसपछि मात्र शल्यक्रिया गर्ने नगर्ने निधो गर्छौ । हामीकहाँ आएका अधिकांश बिरामीहरु धेरै जटिलता भएपछि मात्र आएको कारणले पनि धेरै शल्यक्रिया गर्न नै समस्या भइरहेको छ ।”
कालो ढुसिको संक्रमण भएको शंका लागेपछि नै अस्पतालमा जान उनले सुझाव दिए । कालो ढुसीका बिरामीका लागि दिईने एम्फोटेरीसीन बी नामको औषधिको अहिले अभाव रहेको समेत उनले बताए । यो औषधि कालाजारका बिरामीका लागि प्रयोग गरीदै आएको भए पनि पछिल्लो समय कालो ढुसीका बिरामीका लागि पनि प्रयोग गरीदै आईएको थियो ।
एम्फोटेरीसीन बी औषधिको अभाव रहेका कारण अहिले विकल्पका रुपमा पेसाकोनाजोल औषधिको प्रयोग गरीएको डा. प्रधानाङ्गले बताए ।
कालो ढुसिको संक्रमण भएकालाई प्रयोग गरीदै आएको कालाजारको एम्फोटेरीसीन बी नामको औषधि अहिले सकिएको र मन्त्रालय यो औषधि किन्ने प्रक्रियामै रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा.समिर अधिकारीले बताए ।